रचना – Jagaran
कविताः बेतार को तार जोडिन्छ
बेतार को तार जोडिन्छ, मन मिले घर बार जोडीन्छ ! यक तर्फी मायाको वार छोडिन्छ, लाउ लाउ जस्तो प्यार छोडिन्छ ! मेसो येसरी लाइन्छ कि, जसरी स्वरमा सास जोडिन्छ ! सबै काम बाल छोडिन्छ, उनको तालैमा ताल जोडिन्छ ! मेसो येसरी लाइन्छ कि, जसरी खुकुरिमा धार भरिन्छ ! बेतार को तार जोडिन्छ, मन मिले घर […]
मुक्तकः म स‌ँग चावी हुने भए
दिल चोर्ने म सङ्ग चाबी हुने भए । चोक चोकमा जीवन हाबी हुने भए। म म कहिल्यै पिउने थिएन यो सब। एक बोत्तल पिउदैमा सराबी हुने भए। लेखकः घनश्याम राना (ऋतु)
किनेको फूल ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्डे बेचेको माया रातो गुलाफ क्षणिक सुन्दरता ओइली झर्छ पुरानै माया देखासिकी को पर्व नयाँ मायालु आँखाको प्रेम पिरतीको ब्यापार मन त पापी प्रेम दिबस भताभुङ्ग सपना पारपाचुके लेखकः गणेशभक्त गौतम